ကုန်ကြမ်း PRL-8-53 အမှုန့် (51352-87-5) ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker ဓာတု
SKU: 51352-87-5 အမျိုးအစား: စမတ်မူးယစ်ဆေး
ကုန်ကြမ်း PRL-8-53 အမှုန့် (51352-87-5) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း PRL-8-53 အမှုန့် (51352-87-5) ဖေါ်ပြချက်
ကုန်ကြမ်း PRL-8-53 အမှုန့်မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောမှ neuroscience သုတေသနများတွင်အသုံးပြုမှတ်ဉာဏ်-တိုးမြှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ benzoic အက်ဆစ်နှင့် phenylmethylamine ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ nootropic သုတေသနဓာတုဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ကြမ်း PRL-8-53 အမှုန့် (51352-87-5) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း PRL-8-53 အမှုန့်
ဓာတုအမည် PRL-8053; ကုန်ကြမ်း PRL-8-53 အမှုန့်; methyl 3- (2- (benzyl (methyl) မိုင်နို) ethyl) benzoate Hydrochloride; 3- (2-Benzyl (methyl) aminoethyl) benzoic အက်ဆစ် methyl Ester Hydrochloride; m- [ 2- (Benzylmethylamino) ethyl] benzoic အက်ဆစ် methyl Ester Hydrochloride; Benzoic acid ကို, 3- (2- (methyl (phenylMethyl) မိုင်နို) ethyl) -, methyl Ester, Hydrochloride, methyl 3- (2- (benzyl (methyl); Raw PRL-8-53 အမှုန့် (Hydrochloride)
အမှတ်တံဆိပ် NAmE မရှိနိုင်ပါဒေတာ
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား Nootropic လူတန်းစား
CAS အရေအတွက် 51352-87-5
InChIKey HLBBSWSJLPLPRU-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C18H22ClNO2
မော်လီကျူး Wရှစ် 319.82578
အရည်ပျော် Point 149-152 ℃
အေး။ ခဲသော အမှတ် မရှိနိုင်ပါဒေတာ
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ 2-4 နာရီ
Solubility ရေထဲမှာ 25 MM မှပျော်ဝင်အီသနောအတွက် MM, 50 မှပျော်ဝင်။
Application ကုန်ကြမ်း PRL-8-53 အမှုန့်မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ပတ်သက်သောမှ neuroscience သုတေသနများတွင်အသုံးပြုမှတ်ဉာဏ်-တိုးမြှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူ benzoic အက်ဆစ်နှင့် phenylmethylamine ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ nootropic သုတေသနဓာတုဖြစ်ပါသည်။
ဖြည့်စွက်, ဆေးဝါးများ, မူးယစ်ဆေးဝါးများ
ကုန်ကြမ်း PRL-8-53 အမှုန့် (51352-87-5) ဖျေါပွခကျြ
PRL-8-53 အများအပြားရရှိနိုင်အထိရောက်ဆုံးမှတ်ဉာဏ် Boosters တဦးဖြစ်ယုံကြည်ရသောစမ်းသပ်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏နာမည်အပြည့်အစုံ methyl 3- (2- (benzyl (methyl) မိုင်နို) ethyl) benzoate ဖြစ်ပါတယ်။
သုတေသီများ PRL-8-53 ၏ပါးစပ်ဖြည့်စွက်ကြွက်များတွင်လေ့လာသင်ယူရှောင်ရှားခြင်းတိုးတက်လာဖို့နိုင်ခဲ့သည်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုမှာလူ့လေ့လာမှုလည်း PRL-8-53 အပေါ်ပြုမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီပါဝင်သူတစ်ဦးကို double မျက်စိကန်း crossover လေ့လာမှုအတွက်သီးခြားအချိန်များတွင်တစ်ဦးရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့် PRL-8-53 မျိုချမိပါ။ သင်တန်းသားများကိုပြီးတော့အထူးသနိုင်ရန်အတွက်တဆယ်နှစ်လုံးကို monosyllabic စကားများပါဝင်သည်ဟုတစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်မှုယူခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုချက်ချင်းဖြည့်စွက်ပြီးနောက်သုံးကြိမ်, ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်တစ်နေ့မှာကောက်ယူနှင့်လေးရက်ဖြည့်စွက်ပြီးနောက်ခံခဲ့ရသည်။
အထောက်အထားရှားပါးပေမဲ့, နိမိတ်လက္ခဏာများဒီဒြပ် nootropic ဝင်းသင်ယူနိုင်စွမ်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်စေရန်နိုင်မည်အကြောင်းရှိပါတယ် formation.
PRL-8-53 အမှုန့် (51352-87-5လှုပ်ရှားမှု၏) ယန္တရား?
အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို PRL-8-53 ရဲ့ယန္တရားသည်လက်ရှိတွင်မသိရှိပါ။ ဒါဟာသင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်များအတွက်အရေးကြီးသောတစ် neurotransmitter acetylcholine ၏ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုကိုမြှင့်တင်ရန်လိမ့်မည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, PRL-8-53 အမှုန့်, dopamine အဆင့်ဆင့်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါမှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ကောင်းမွန်နိုင်သည့်, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လျှော့ချပေးပါတယ်။ ဒါဟာအစစိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အိပ်မပျော်တိုးမြှင့်နိုင်သည့် serotonin ထုတ်လုပ်မှု, ပိတ်ဆို့စေနိုင်သည်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား of PRL-8-53 အမှုန့် (51352-87-5)
PRL-8-53 Purportedly သိမှုက Function ကိုပိုကောင်းစေ
အကြံပြုထားသည် PRL-8-53 အမှုန့် (51352-87-5) သောက်သုံးသော
လူ့လေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့သောက်သုံးသောတစ်ခုတည်းပါးစပ်ဖြည့်စွက်ပေး PRL-5-8 ၏ 53 မီလီဂရမ်အမှုန့်ဖြစ်ခဲ့သည်။
PRL-8-53 အသုံးပြုသူများအဆိုအရ 10 နှင့် 20 မီလီဂရမ်အကြားဆေးများထိရောက်သောနှင့်ကောင်းစွာ tolerated. ခဲ့ကြသည်
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး of PRL-8-53 အမှုန့် (51352-87-5)
ကြွက်များအတွင်းအဆိပ်အတောက်လေ့လာမှုများ LD50 နှုန်းထားများနဲ့အတော်လေးမြင့်မားသောတံခါးခုံကိုပြသပေမယ့်သိသာနောက်ထပ်သက်သေအထောက်အထားများလိုအပ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သူက PRL-8-53 တစ်အလားအလာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဦးနှောက်အတွင်းမော်တာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းလျှော့ချရေးပင်ဖြစ်သည်ပုံရသည်။
PRL-8-53 အမှုန့်များ၏တစ်ခုတည်းသောလူ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခုနှစ်, သောက်သုံးသောမီလီဂရမ်ငယ်5မဆိုဘေးထွက်ဆိုးကြိုးမြားခံစားစေခဲ့ပါဘူး
alpha-GPC (L-အာလဖ glycerylphosphorylcholine, choline alfoscerate) သဘာဝဖြစ်ပါတယ် ......
ကုန်ကြမ်း NSI-189 အခြေစိုက်စခန်းအမှုန့်ဟာ ... အဘို့အ Neuralstem, Inc တို့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်မှာကြောင်းစမ်းသပ်, အလားအလာလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။